Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTurkey zokuPhula » I-Turkey isoyikisa ngokugxotha i-US kunye nabanye oonozakuzaku be-9
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseTurkey zokuPhula
Oktobha 23, 2021
UMongameli waseTurkey uRecep Tayyip Erdogan
Abathunywa baseJamani, eCanada, eDenmark, eFinland, eFrance, eNetherlands, eNew Zealand, eNorway, eSweden naseMelika babizelwa kwiSebe laseTurkey langaphandle malunga nesitatimende sabo "esingakhathaliyo".
Usomashishini waseTurkey kunye nophilanthropist, u-Osman Kavala, ugcinwe ejele ngaphandle kokugwetywa ukusukela emva konyaka we-2017.
UKavala ujongene nenani elikhulu lezityholo, kubandakanya ukutyholwa kwemali yokuchasana no-Erdogan kunye nokuthatha inxaxheba kuqhushululu olwenziwe ngo-2016.
Abaxhasi bakaKavala bakholelwa ukuba ulibanjwa lezopolitiko, ejolise kwimisebenzi yakhe yamalungelo oluntu e-Erdogan 'eyandayo yokuba ligunya' eTurkey.
Ngexesha lentetho yesidlangalala namhlanje, uMongameli waseTurkey Recep Tayyip Erdogan ubhengeze ukuba ukhuphe imiyalelo kumphathiswa wezangaphandle welizwe ukuba abhengeze oonozakuzaku bangaphandle abali-10 ikarikuni, kubandakanya umthunywa wase-US, 'persona non grata'.
"Ndinike imiyalelo eyimfuneko kumphathiswa wethu wezangaphandle, ndithe niyakujongana nokugxekwa koonozakuzaku abalishumi ngokukhawuleza," utshilo u-Erdogan.
ErdoganUmsindo ububangelwe yingxelo edibeneyo, ekhutshwe ngoonozakuzaku abalishumi ekuqaleni kwale veki.
Abathunywa babongoza isisombululo esikhawulezileyo nesilungileyo kwityala lika-Osman Kavala - usomashishini waseTurkey nophilanthropist ogcinwe entolongweni ngaphandle kokugwetywa ukusukela emva konyaka ka-2017. UKavala ujongene nenani elikhulu lezityholo, kubandakanya nokutyholwa kwemali yokuchasanaErdogan Uqhanqalazo kunye nokuthatha inxaxheba kwi-coupled 2016 coup. Abaxhasi bakaKavala, nangona kunjalo, bakholelwa ukuba libanjwa lezopolitiko, elijolise kwimisebenzi yakhe yamalungelo oluntu e-Erdogan ikarikuni.
Isiteyitimenti esidibeneyo sapapashwa ukuphawula isikhumbuzo sesine sokubanjwa kukaKavala okokuqala. Usomashishini sele enziwe amatyala kwaye wagwetywa izihlandlo ezibini ngezityholo ezinxulumene nezidubedube zaseGezi Park zango-2013 kunye no-2016 ongaphumelelanga. Oku, nangona kunjalo, khange kumncede nganto uKavala, njengoko ii-odolo zokukhululwa kwakhe ziye zangeniswa kwizityholo ezitsha kwangoko emva kokugwetywa.
Ngokukhawuleza emva kokukhutshwa kwesitetimenti esidibeneyo, abathunywa baseJamani, Canada, Denmark, Finland, France, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden kunye ne-US babizelwa kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezangaphandle eTurkey malunga nengxelo yabo "engenankathalo" kunye "nokwenza ezopolitiko. wetyala laseKavala. ”